မှိုနှင့် ဆက်နွယ်သော ရင်ကြပ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေမည့် နည်းလမ်း ၈ ခု - Hello Sayarwon
မှိုနှင့် ဆက်နွယ်သော ရင်ကြပ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေမည့် နည်းလမ်း ၈ ခု
မှိုသည် သင့်တွင် ရင်ကြပ်ရောဂါရှိပါက ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဘဲ မှိုကို နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မှိုနှင့် ဆက်နွယ်သော ရင်ကြပ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေမည့် နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ သည်ဆောင်းပါးထဲမှာ အဖြေပါ ပါတယ်။
မှိုကို သင့်အိမ်၊ ဆိုင်၊ လုပ်ငန်း စသည့် နေရာတိုင်း လိုလိုမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ပန်းဆိုင်၊လယ်ယာ၊ ပန်းခြံ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်၊ ချွေးထုတ်ခန်း၊ စက်ရုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနေရာ စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနေရာများတွင် အလုပ်လုပ်ရပါက နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါက ဓါတ်မတည့်သူများသောက်သည့် ဆေးကို သောက်သင့်ပါတယ်။
ရင်ကြပ်စေသော အရာများကို ရှောင်ပါ။
မှိုပမာဏများသော နေရာများကို မသွားပါနှင့်။ သို့မှသာ ရှူသွင်းမိသော မှိုအရေအတွက် နည်းမှာပါ။ အပင်နှုတ်ခြင်း၊ အရွက်ခူးခြင်း၊ မြက်ရှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဆိုပါက ပြုလုပ်ပြီးပြီးခြင်း ရေချိုးရပါမယ်။
မှိုမဝင်အောင် ကာကွယ်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း
အိမ်ထဲ မှိုမကပ်စေရန် ပြတင်းပေါက်များကို ပုံမှန် ဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်း အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ချက်ပြုတ်ပါက အငွေ့ထုတ်ပန်ကာကို အသုံးပြုပြီး တံခါးများ ပိတ်ထားပါ။ ထိုသို့ဖြင့် စိုထိုင်းသော လေများ၊ အငွေ့များ အိမ်ထဲ မပြန့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်လျှော်ပြီးပါက အဝတ်များကို စက်ထဲမှ ချက်ချင်း ထုတ်ပါ။ အဝတ်များ အခြောက်ခံသည့်အခါ အဝတ်စိုမျာကို အိမ်ထဲ မလှန်းပါနဲ့၊ အပြင်ဘက်တွင် သေချာ ဖြန့်လှန်းပါ။ အမှိုက်ပုံးနှင့် ရေခဲသေတ္တာများကို ပုံမှန် မကြာခဏ သန့်ရှင်းပေးပါ။
သင့်တွင် မှိုနှင့် ဆက်နွယ်သော ရင်ကြပ်ခြင်းရှိသည်ဟု သံသယဖြစ်ပါက မှိုကို မိမိဘာသာမိမိ ဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။
အိမ်တွင်း စိုထိုင်းခြင်းကို လျော့နည်းအောင်လုပ်ပါ။
စိုထိုင်းဆများပါက မှိုများ ပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်။ စိုထိုင်းဆကို ၆၀% အောက်ထားပါ။ ၃၀% နှင့် ၅၀% ကြားရှိပါက ပိုကောင်းပါတယ်။
စိုထိုင်းဆ ညှိသောပစ္စည်းများနဲ့ အဲကွန်းများ က အသုံးဝင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်း စိုထိုင်းဆတိုင်းသော ကိရိယာကိုလည်း ဝယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
မြေအောက်ခန်းများကို လည်းမကြာခဏ စစ်ဆေးသန့်ရှင်းပေးပါ။
အိမ်ကြမ်းပြင်ကိုလည်း ခြောက်သွေ့အောင် ထားပါ။ စိုထိုင်းဆ ညှိသောပစ္စည်းများ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြမ်းပြင်ကို linoleum သို့မဟုတ် ဘိလပ်မြေ အသုံးပြုပါ။ မြေအောက်ခန်းထဲတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများသာ သိုလှောင်ပါ။ စာရွက်ဟောင်း၊ အဝတ်များ နှင့် အိပ်ယာခင်းများက မှိုစွဲလွယ်ပါတယ်။ ထိုပစ္စည်းများကို သိုလှောင်သိမ်းထားမည်ဆိုပါက ရေမဝင်သော အကာများဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ်။
အိမ်အောက်တွင် သစ်ရွက်များ ရှိနေပါက ဖယ်ရှားပါ။
ချုံပုတ်များရှင်းခြင်း၊ ရေစီးရေလာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကလည်း အရေးပါပါတယ်။ အိမ်ထဲ လေ၊နေ တို့လုံလောက်စွာ ဝင်အောင်ထားပါ။
ရေစင်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊
မီးဖိုချောင်၊ အိမ်သာ၊ ရေချိုးကန် စသည်တို့မှ ရေယိုခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ပိုက်များ ပေါက်နေပါက အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ပါ။ စိုထိုင်းသော နေရာများတွင် မှိုများ ပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အဲကွန်း လေအေးပေးစက် အသုံးပြုပါ
အဲကွန်ဝယ်ပါက အလည်တွင် High efficiency particulate are filter ပါသော အဲကွန်းကို ဝယ်ယူပါ။ ထိုအရာက စိုထိုင်းဆကို ညှိပေးပြီး မှိုများကို လေထဲမှ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲကွန်းကို မကြာခဏ သန့်ရှင်းပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
မှိုရှိသော နေရာများကို မသွားခင် ဓါတ်မတည့်ခြင်းအတွက် သုံးသော ဆေးများ ကြိုသောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း သောက်သုံးဖို့လိုပါတယယ်။
မှိုကြောင့် ရင်ကြပ်ခြင်းဟာ ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်ခြင်း၊ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် ။ အိမ်ကိုလည်း မကြာခဏ သန့်ရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြင့် လက္ခဏာများ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Allergies, asthma, and molds. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000488.htm. Accessed June 3, 2017.
Mold allergy – self-management. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mold-allergy/manage/ptc-20200870. Accessed June 3, 2017.
Mold allergy. http://www.aafa.org/page/mold-allergy.aspx. Accessed June 3, 2017.
10 Ways to Reduce Mold Allergies. http://www.webmd.com/allergies/ss/ways-to-reduce-mold-allergies-slideshow. Accessed June 3, 2017.
Mold in the environment. https://www.cdc.gov/mold/faqs.htm. Accessed June 3, 2017.